Duqaymaha maamulkii Trump ka fuliyay Soomaaliya oo la shaaciyay | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Duqaymaha maamulkii Trump ka fuliyay Soomaaliya oo la shaaciyay
Duqaymaha maamulkii Trump ka fuliyay Soomaaliya oo la shaaciyay
Hay’ada oo wax ka qorta waddamada Soomaaliya, Libya, Syria, Iraq, Yemen iyo Pakistan waxay sheegtay in maamulkii Trump uu gudaha dalka Soomaaliya ka gaystay 276 weerar oo cirka iyo dhulka isugu jira intii u dhaxaysa 2017-kii ilaa 2021-ka, waxayna sheegtay Hay’adu in weeraradaas 205 ka mid ah rasmi ahaan loo shaaciyey.
Taas marka la barbardhigo xilliyadii ay talada hayeen Obama iyo Bush ayey hay’addu sheegtay in Soomaaliya Maraykanku ka gaystay 67 hawlgal ayadoo Tilmaamtay in xilligii Trump uu maamulku dabciyey xeerarkii u yaallay hawlgallada milatari ee Maraykanku Soomaaliya ka gaysanayey.
Hay’ada Airwars waxay sheegtay in duqaymaha Soomaaliya ay yaraadeen muddadii u dhaxaysay 17-ka May ilaa 9-ka Juulaay 2020-ka, waxayna taas la xiriirisay xanuunka Covid-19.
Hay’adu waxay Xustay in ka sokow tirada badan ee duqaymaha ay hoos u dhaceen dadka rayidka ah ee lasoo sheegayo inay waxyeelladu kasoo gaartay sida ay diiwaangelisayhay’addaasi.
Sidoo kale hay’addaan waxay sheegtay in hawlaglada wadajirka ah ee ay qaadayeen Maraykanka iyo Ciidamada Soomaalida ay u ekaayeen dagaallo Toos ah.
Tusaale ahaan waxay sheegtay hay’addu in ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalidu ay ku gulaysteen inay Al-Shabaab ka saaraan Jannaale sannadkii hore, waxaana hawlgalkaas dhinaca hawada ka taageeray sida warbixinta lagu sheegay lix duqaymood oo Maraykanku gaystay.
Markii ugu horraysay muddo sannado ah ciidamada Soomaalida waxaa u suurtogashay inay xajistaan gacan ku haynta goobaha cusub ee laga qabsaday Al-Shabaab, sida ay sheegtay hay’addu.
Waxaase dhinaca kale jirta in weli Al-Shabaab ay meelo badan ka haystaan gobollada Shabeellada Hoose, Bay iyo Bakool.
Waxay sheegtay Airwars in hawlgalka ciidamada Maraykanka ee AFRICOM uu sameeyey daahfurnaan Sannadkii 2020-ka kadib markii ay bilaabeen inay saddexdii biloodba mar daabacaan dadka rayidka ah ee waxyeelladu kasoo gaarto duqaymaha,Tallaabadaas darteed AFRICOM waxay qiratay in qof rayid ah uu ku dhintay saddex kalena ay ku dhaawacmeen duqayn ka dhacday nawaaxiga Jilib 2-dii Febraayo 2020ka.
Goor dambena AFRICOM waxay sheegtay in laba qof oo rayid ah ay ku dhaawacmeen duqayn kale oo ka dhacday isla Jilib 17-kii Febraayo 2020.
Dhinaca kale waxay Xustay Hay’ada Airwars in ururka Daacish ay ku sugan yihiin Goobo aad u yar oo ka tirsan Puntland, iyagoo cadaadis kala kulmay ciidamada Soomaaliya, Maraykanka iyo Al-Shabaab. Daacish waxaa sannadkii hore uu Maraykanku la beegsaday hal duqayn keliya.
Ugu dambayn waxay Hay’ada Airwars sheegtay in tallaabadii ugu dambaysay ee maamulka Trump uu qaaday intii uusan xilka ka degin ay ahayd inuu boqollaal ciidamada Maraykanka ah kasoo saaro Soomaaliya, tallabadaas oo dadka qaar u arkeen inay timid xilli aan munaasib ahayn maadaama ay Soomaaliya doorasho isku diyaarinayso, balse dhinaca kale waxaa iyaguna soo dhoweeyey dhinacyo kale oo u arkay in Trump uu ka dhabeynayo soo af-jaridda dagaallada Maraykanku kaga jiray dibedda dalkiisa.
Previous articleDHAGEYSO:Abwaan Sandheere oo Muqdisho ku geeriyooday
Next articleWadahadallo laga bilaabayo Myanmar